'सूर्यवंशी' मा नजम्ने भयो कट्रिना र अक्षयको जोडी, यस्तो छ कारण ! – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsBollywood‘सूर्यवंशी’ मा नजम्ने भयो कट्रिना र अक्षयको जोडी, यस्तो छ कारण !
बलिउड चर्चित निर्देशक रोहित सेट्टीको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘सूर्यवंशी’मा अभिनेता अक्षय कुमार र अभिनेत्री कट्रिना कैफको जोडी जम्ने चर्चा केहि समय देखि निकै चलिरहेको थियो ।
तर अब स्वयम एक्टर्सले सो कुरा खारिज गर्दिएका छन् । कट्रिनाको स्पोक्स्पर्सनले ‘सूर्यवंशी’मा अक्षय र कट्रिनाको जोडी नजम्ने बताएका छन ।
सार्वजनिक खबरका अनुसार, यतिबेला कट्रिना फिल्म ‘भारत’को छायांकनमा व्यस्त छिन । सोहि कारण उनको बिजी सेडुलले गर्दा अन्य कुनै प्रोजेक्टमा साइन गरेकी छैनन् ।
कट्रिनाले यो फिल्म नगर्ने भएपछि अब यो फिल्ममा लिड एक्टर्समा को आउछ त भन्ने कुरा चर्चको विषय बनेको छ ।
अक्षय कुमारको फिल्म ‘केशरी’भखरै रिलिज भएको छ । रिलिज भएसंगै सो फिल्मले अहिले बलिउड बक्स अफिसमा निकै धमाका मचाहि रहेको । छ यसका साथै उनको हातमा अहिले ‘सूर्यवंशी’, ‘हाउसफुल 4’, ‘गुड न्यूज’ र ‘मिशन मंगल’ लगाएतका चार फिल्म रहेका छन् ।
August 14, 2017 Keshab Khadka Bollywood, Entertainment, News 0